आकाश र नाजिरसँग साम्राज्ञी, ‘तिमी सँग’ टिजर कस्तो छ ? « Ramailo छ
आकाश र नाजिरसँग साम्राज्ञी, ‘तिमी सँग’ टिजर कस्तो छ ?
युवा कलाकारहरुको अभिनय रहेको फिल्म ‘तिमी सँग’ भदौ ८ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने भएको छ । टिजर रिलिज गर्दै लेखक, निर्माता तथा निर्देशक शिशिर राणाले आफ्नो फिल्मको रिलिज मिति भदौ ८ गतेलाई तोकेका हुन् । टिजर :
संवाद बिनाको ‘तिमी सँग’ को टिजर आकर्षक लाग्दछ । टिजरमा फिल्मका मुख्य तीन पात्रहरु साम्राज्ञी, आकाश श्रेष्ठ र नाजिर हुसेन प्रस्तुत छन् । साथमा सदाबहार अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको पनि केही झलकहरु छन् । करिश्माले फिल्ममा एक गीतमा नृत्य पस्केकी छिन् । तीन साथीहरुको यात्रालाई लिएर राणाले ‘तिमी सँग’ बनाएका हुन् ।